samedi, 25 juin 2016 16:14
Analakely: Mifaly ireo ankizy
Nifaly ireo ankizy teny Analakely sy manodidina amin'izao ankatoky ny 26 jiona izao. Nisy ny karazana kilalao samihafa izay netina nampifaly azy ireo, nefa teo ihany koa ny lehibe izay nisy izay sahaza azy ireo. Nisy ihany koa anefa ny hira fiderana an'Andriamanitra sy ny fanentanana maro samihafa ary ny fizarana arendrina ho an'ireo ankizy izay tonga teny. Izany rehetra izany moa dia ho entina hanamarihana ny fitsenana izao asaramanitra izao.
samedi, 25 juin 2016 15:52
Fifamoivoizana: Nitohana izay naleha rehetra
Eto ankatoky ny fetin'ny 26 jona dia nitohana ny fifamovoizana izay naleha rehetra, na izany aza ny teny analakely sy ny manodidina, olana mbola tsy mety voavaha hatramin'izao.
samedi, 25 juin 2016 15:49
Tafiditra ao anatin'ny fankalazana izao fetim-pirenena izao ihany koa moa ny fampahafantarana an-tsary ireo zava-niseho nandritrin'ny fotoana nisian'izany fanjanahantany izany, liana ireo olona.
vendredi, 24 juin 2016 18:36
Sary Sobika Toamasina
Ladoany Toamasina: Niverina niasa
Nanomboka niverina niasa ireo mpiasan'ny ladoany eto Toamasina io hariva io. Nifanaretsaka nitanjozotra ireo fiara vaventy niditra sy nivoaka ny faditseranana. Mbola tsy tena niravona tanteraka anefa ny ahiahin'ireo mpiasa fa araky ny efa voalazan'izy ireo dia grevy fanairana indroa andro iny ka tsy eken'izy ireo ny hevitra ambadika amin'ity resaka fanadinana ny farim-pahalan'ny mpiasa ity, ary indrindra ny hevitra mety hamarotana ny orin'asa.
vendredi, 24 juin 2016 18:12
Ambohipo: Didipaotra faobe, hetsika niaraka tamin'i Lanto Rakotomanga
Tetsy amin'ny sekoly EPP Ambohipo no nanatotosana ny hetsika didipaotra faobe niarahana tamin'i Solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo boribory tany faharoa Lanto Rakotomanga ny sabotsy 18 jona lasa teo. Zaza 100 teo no notapahana mamaimpoana ary dia notolorana kilalao maro samihafa sy vatomamy moa izy ireo avy eo. Tsy adino anefa ny nanolotra boky ho an'ny sekoly EPP Ambohipo mba ho tahiry ianaran'ireo ankizy mpianatra ato amn'ity sekolim-bahoaka ity.
vendredi, 24 juin 2016 18:10
Fankalazana ny fetim-pirenena: Nanampy ireo sahirana ny Solombavambahoaka Lanto Rakotomanga
Fizarana arendrina 400 isa sy vatomamy ho an'ankizy tetsy amin'ny Fokontany Ambohimiandra no notontosain'ny Solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo boribory tany faharoa Lanto Rakotomanga io maraina io. Tsy adino tamin'izany hetsika izany koa ny fanampiana ireo be antitra sy zoky olona ka nanomezany azy ireo solombodiakoho.
vendredi, 24 juin 2016 16:59
Sary Masoivoho Amerikanina
Miara-miory amin'ny Malagasy ny Amerikanina
Amin’izao ankatoky ny Fetim-pirenena Malagasy izao, ny Masoivoho Amerikana eto Antananarivo dia maneho etoana ny fiaraha-mioriny tanteraka amin’ny vahoaka Malagasy noho ireo aina nafoy nandritra ireo fanafihana tany amin’ny faritra atsimon’ny Nosy--------------With the Independence Day of Madagascar approaching, the U.S. Embassy in Antananarivo would like to present its sincerest condolences to the Malagasy people for the loss of innocent lives during the recent attacks in the southern part of the country.
vendredi, 24 juin 2016 15:17
Ankazoabo : Tonga nanolotra fanampiana ny PM
Namangy sy nivatsy fanampiana ho an'ireo niharan-doza teo amin'ny sampanan'i Berenty izay namoizana ain'olona 31 ny 21 jona lasa teo Praiminisitra. Nanambara ity farany fa tsy maintsy karohina ireo dahalo ary tsy ho avela amin'izao fotsiny ity raharaha ity.
jeudi, 23 juin 2016 14:05
Mahajanga : Nanampy ny sahirana sy ireo beantitra ny Karana
Tsy nanadino ireo olona sahirana isam-pokontany sy ireo beantitra ireo karana mivondrona ao amin'ny fikambanana AZOI. Fanampiana toy ny vary sy ny savony ary ny sira no natolon'izy ireo io maraina io. Ny fikambanana no nividy ary nanolotra izany tamin'ny Kaominina ambonivohitr’i Mahajanga hotsinjaraina amin'ireo olona sahirana sy ny beantitra.
mercredi, 22 juin 2016 18:54
Mahajanga : Zaza roa mianadahy nisy nikasa hangalatra
Notambazana rangahy iray arendrina ireto zaza ireto mba hanaraka azy ny alatsiniainy teo. Nentiny nitsoaka ireo zaza nony avy eo saingy tsikaritry ny havany. Nampandre ny ray aman-drenin'ireo zaza ireto farany, ny sasany nanenjika ilay mpangala-jaza. Nony voasambotra ilay rangahy dia nilaza fa tsy nangalatra izany izy fa hividianany vatomamy ireo zaza ireo. Niantso mpitandro ny filaminana ny ray aman-drenin’ilay zaza. Tazomina ao amin’ny tobin'ny zandary ilay mpanagala-jaza amin'izao, atao fanadihadiana.
Page 456 sur 516